Curricula Archives - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Hafatra maika ho an'ny olombelona - avy amin'ny tantely mpiasa
Novambra 13, 2021 0
Amin'ity sarimiaina fohy novokarin'ny Metta Center for Nonviolence ity, mihaona amin'i Buzz — tantely mpiasa iray izay manazava ny fomba ilain'ny tsy fanaovana herisetra mitana anjara toerana lehibe amin'ny famahana ny krizy momba ny toetrandro. [tohizo ny famakiana…]
Museums for Peace: loharano
Aogositra 22, 2021 0
Ny tranombakoka ho an'ny fandriam-pahalemana dia andrim-pampianarana tsy mitady tombombarotra izay mampiroborobo ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fanangonana, fampisehoana ary fandikana ireo fitaovana mifandraika amin'ny fandriam-pahalemana. Ny tambajotra iraisam-pirenena an'ny tranombakoka ho an'ny fandriam-pahalemana dia mamaritra ny loharano maro mifandraika amin'ny tranombakoka fandriam-pahalemana, ao anatin'izany ny lahatahiry manerantany, ny fizotran'ny fihaonambe ary ny lahatsoratra navoakan'ny peer. [tohizo ny famakiana…]
Horonantsary fanabeazana momba ny fitaovam-piadiana nokleary vaovao ho an'ny ankizy mianatra
Aogositra 7, 2021 0
Ireo horonan-tsary vaovao dia novolavolain'ny Voice for a Nuclear-Weapon-Free World, fandraisana andraikitry ny United Religions Initiative. [tohizo ny famakiana…]
Baomba… Mandehana !: Tetikasa vaovao iray mitrandraka baomba sy fitaovam-piadiana nokleary
Jolay 22, 2021 0
Baomba… Mandehana! dia tetikasa iray hijerena ny fiantraikan'ny daroka baomba an'habakabaka amin'ny sivily mandritra ny Ady Lehibe Faharoa ary hampiasa ny tahiry tsy manam-paharoa an'ny The Peace Museum UK handinihana ny fomba niforonan'ny fandriam-pahalemana ho setrin'izany. [tohizo ny famakiana…]
Gazety vaovao: Fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny zon'olombelona
Jolay 16, 2021 0
Ny boky vaovao «Fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny zon'olombelona» dia mampahafantatra ny mpianatra sy ny mpanabe ny fanamby sy ny fahafaha-mampihatra ny fandriam-pahalemana sy ny fanabeazana ny zon'olombelona amin'ireo tranonkala manerantany. [tohizo ny famakiana…]
Fampidirana 2 Disarmament: andian-dahatsary
Jona 1, 2021 2
Ny andian-dahatsary # Intro2Disarmament dia misy horonantsary fohy 5 izay manazava ny fomba fandraisan'anjaran'ny fitaovam-piadiana amin'ny tontolo azo antoka, milamina kokoa sy maharitra amin'ny fomba mora azo. [tohizo ny famakiana…]
Simulation fianarana ny harena ara-pirazanana
Enga anie 31, 2021 0
Ny mofo ho an'izao tontolo izao dia manome simulation ho fitaovana ifandraisana izay manampy ny olona hahatakatra ny fifandraisan'ny fitoviana ara-poko, ny hanoanana, ny fahantrana ary ny harena. [tohizo ny famakiana…]
Ampio ireo mpianatra hifandray sy hisaintsaina ny taona
Enga anie 25, 2021 0
Ny fiatrehana ny tantara sy ny tenantsika dia manome hetsika hitarihana ny mpianatra hanao dinidinika ho fomba iray hisaintsainana ny zava-nitranga tamin'ny taona 2020 ary hifandray amin'ny fotoana izay ferana ny dia sy fivoriambe. [tohizo ny famakiana…]
Fandraisana andraikitra, Rariny ary fanasitranana aorian'ny fitsapana an'i Derek Chauvin
Aprily 24, 2021 0
Niatrika ny tantara sy ny tenantsika no namolavola ity "Idea fampianarana" ity mba hanampiana amin'ny fitarihana adihevitra voalohany amin'ny didim-pitsarana momba ny didim-pitsarana tao amin'ny fitsarana an'i Derek Chauvin. [tohizo ny famakiana…]
Fanangonana loharanom-pahalalana ho an'ny fandriam-pahalemana avy amin'ny Atrium Society
Aprily 1, 2021 0
Ny Fikambanana Atrium dia nitahiry ireo boky sy fandaharam-pianarana fandriam-pahalemana ho an'ireo mpampandry tany izay liana amin'ny fahatakarana ny fototry ny fitsarana an-tendrony. [tohizo ny famakiana…]